को हुनेछ २०११ को विश्वकप विजेता ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← Most expensive marriage ceremony of this decade
“एकको साथी… राजनीति माथी” →
को हुनेछ २०११ को विश्वकप विजेता ?
Posted on 22/03/2011 by राजु गुरुङ्ग | टिप्पणी छोड्नुहोस्
– सीताराम अग्रहरि
भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशमा यही फेबु्रअरी १९ तारिख अर्थात् फागुन ७ गते सुरु भएको एक महिना १३ दिन लामो विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेता को हुने कौतूहल क्रिकेट प्रेमीहरूमा बढ्दै गएको छ । यस पटक सहभागी हुने १४ टिम दुई समूहमा विभाजित गरिएका छन् जसबाट चार चार टिमले राउन्ड रोविन लिग खेल्ने छन् र शीर्ष चार चार टिम दुवै समूहबाट क्वाटर फाइनलमा प्रवेश गर्ने छन् । र यहीँबाट मात्र रियल च्याम्पिएनको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ । लिग म्याचलाई एक किसिमले अभ्यास म्याच भने पनि हुनेछ । यस अघि ‘फुच्चे टिम’ बाट भने ठूल्ठूला टिम पनि प्रारम्भमा धाराशायी नभएका होइनन् । गैरटेस्ट खेल्ने राष् ट्रमा क्यानडा, नेदरल्यान्डस्, आयरल्यान्ड यस पटक छनोट भएका छन् । यिनको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि ठूला टिमसँगको टक्करमा मूलतः अनुभव हासिल गर्ने नै हुनेछ । त्यो भन्दा अलि ठूलो माथिल्लो अर्थात् मध्यम खालको टिम हुन केन्या, जिम्बाब्बे र बङ्गलादेश । यसमा बङ्गलादेशले एक दिवसीय क्रिकेटमा केही यता राम्रो प्रगति गरेको छ । न्युनिल्यान्डमाथि विजयपछि यस टिमको खासगरी आफ्नो गृह मैदानमा, घरेलु दर्शकसमक्ष हौसला राम्ररी बढेको पाइन्छ । बङ्गलादेश अहिले लिग चरणबाट पार पाउने एवम् क्वाटर फाइनलसम्म प्रवेश गर्ने ल्याकत राख्दछ । टेस्ट टिममध्ये न्युजिल्यान्ड र वेस्टइन्डिज यस पटकका कमजोर टिम हुन् ।
जहाँसम्म उपाधि विजयको कुरा छ, अस्ट्रेलिया, भारत, इङ्ग्ल्यान्ड, श्रीलङ्का दक्षिण अफ्रिका र पाकिस्तानसमेत उपाधिका प्रवल दावेदार छन् । यी सबैमा पाकिस्तान अलि अभागी टिम नै हो जहाँ श्रीलङ्काली टिम पाकिस्तान भ्रमणमा रहँदा आतङ्कवादी आक्रमण भएको थियो । यसले गर्दा पाकिस्तानले सहआयोजनाको सनौलो अवसर गुमाउनु पर्‍यो । त्यसपछि म्याच फिक्सिङ प्रकरणले गर्दा पाक क्रिकेटमा खैलाबैला नै मच्चियो । फलस्वरूप पाकटिमले मोहमद आमीर र मोहमद आसिफजस्ता पूर्व कप्तान इमरान खानको शब्दमा विश्वकै सबभन्दा राम्रो बलिङ जोडी गुमाउनु पर्‍यो भन्नु पर्दैन कप्तान सलमान बट्ट पनि फिक्सिङको आरोपमा आमीर र आफिफसँगै प्रतिबन्धित भएका छन् । पाकिस्तानलाई अर्को झट्का तेज बलर सोहेल तनवीरको चोटले लागेको छ । उनको सट्टा जुनैद खान टिममा समावेश गरिएका छन् । कप्तानीको विवाद पनि पाक टिमको मनस्थिति निर्माणमा वाधक बन्यो । साहिद अपि|mदी टिमको घोषणाको निकैपछि मात्र कप्तान नियुक्त गरिए । यी सबै परिस्थिति पाक टिमको सम्भावनालाई असर पार्ने खालका छन् । पाक टिमका लागि नकारात्मक पक्ष हो घरेलु दर्शकको अनुपस्थिति तथापि पाक खेलाडी अब यसका लागि अभ्यस्त भइसकेको हुनुपर्छ । यसका बाबाजुद पाक टिम अप्रत्यासित नतिजा ल्याउन क्षमता भएको टिम हो । आफ्नो दिनमा यसले ठूलो उलटफेर गर्न सक्छ तर के उपाधि नै जित्ला र ? इमरानको शब्दमा आमीर र आसिफ भएको भए पाक प्रवल दावेदार हुन सक्थ्यो तर अब यो ‘अन्डर डग’ अर्थात् ‘छुपे रुस्तम’ टिम हो । नबिर्सौं, १९८३ मा विश्वविजेता टिम भारतलाई कसैले विजेताको रूपमा लिएको थिएन । यो पाक टिमले निरन्तर राम्रो गर्न सक्ने कुरामा भने शङ्कै देखिन्छ ।
यो खतरनाक टिम हो । चामिण्डा भास र सनथ जयसूर्याको अभावमा पनि यो श्रीलङ्काली टिम एकदमै बलियो र सन्तुलित छ । यसको उदाहरण हालै सकिएको वेस्टइन्डिया विरुद्धको अन्तिम म्याच हो । जहाँ मुरलीधरण, लसिथ मालिङ्गाको अनुपस्थितिमा समेत श्रीलङ्काले सहज नै वेस्टइन्डिजलाई हराएको थियो । आफ्नो मैदानमा त श्रीलङ्का झनै बलियो हुनेछ र यो टिममा अलराउन्डर पनि प्रशस्त छन् । स्मरणीय छ, भारतीय उपमहाद्वीपमा भएको प्रतियोगितामा भारत र पाकिस्तानले कप जित्न कसेका छैनन् मात्र श्रीलङ्काले -१९९६मा) यो गौरव पाएको छ ।
अस्ट्रेलिया विश्वको नम्बर एकदिवसीय क्रिकेट टिम हो र यसले जसरी इङ्ग्ल्यान्डलाई भर्खरै ६-१ ले पराजित गर्‍यो त्यसपछि यो टिम पुनः उपाधिको प्रवल दावेदारको रूपमा देखापरेको छ । अस्ट्रेलियाका लागि सबभन्दा चिन्ताका कुरा थियो, कप्तान रिकी पोन्टिङको र्फम र फिटनेस । अर्को चिन्ता, उपकप्तान माइकल क्लार्कको र्फम । यहाँसम्म कि इङ्ग्ल्यान्डविरुद्ध आफ्नै गृह मैदानमा ओलर्ंदा उनका समर्थकले क्लार्कलाई हुटिङ गरेका थिए तर त्यो म्याचमा महìवपूर्ण अर्द्धशतक ठोकेर अर्को म्याचमा शानदार पाली खेल्दै उनी र्फममा फर्किएका छन् । अस्ट्रेलियाका लागि ठूलो झट्का भने ३६ वषर्ीय अनुभवी माइक हसीको चोट हो जसले गर्दा उनी विश्वकपबाट बाहिरिएका छन् । भारतीय उपमहाद्वीपको विकेटमा एवम् घरेलु दर्शकको समर्थन बिना अस्ट्रेलियाका तेज बलरले कस्तो प्रदर्शन गर्ने छन्, त्यसैमा अस्ट्रेलियाको सम्भावना निहीत छ ।
अस्ट्रेलियासँग ताजा ७ एकदिवसीयल म्याचको शृङ्खलामा १-० ले पराजित भए पनि इङ्ग्ल्यान्डलाई कमजोर आफ्नु भूल हुनेछ । अस्ट्रेलियासँगको हार एकतर्फी नरहेको, ३०० भन्दा बढी रन बनाएर पनि इङ्ग्ल्यान्ड पराजित भएको कुरा स्मरणीय छ । चोटग्रस्त तर र्फममा रहेको इयान मोर्गन विश्वकपबाट बाहिरिए पनि रवि वोपारा र्फकनु राम्रै कुरा हो । इङ्ग्ल्यान्ड सबभन्दा उपाधिका लागि भोको टिम हुनपर्छ र यही कुरा उसको सवल पक्ष हो । उसको एउटा मात्र समस्या विश्वकपमा मानिसकताकै हो यही कारणले राम्रो टिम भएर पनि फुटबलमा समेत बेलायती हार्ने गरेका छन् ।
राम्रो साथै विश्वकप जित्न नसकेको टिम इङ्ग्ल्यान्डपछि दक्षिण अफ्रिका पनि हो । हासिम अमलाग ज्याक कालिस, एवी डिभिलियर्स कप्तान ग्राहम स्थिमको दावेदारलाई प्रवल र उज्जवल बनाउने खेलाडी हुन् । डेल स्टेन, मोनी मार्कल तगडा बलिङ स्टार हुन् । अलराउन्डरको कमी, दक्ष स्पिनरको अभाव दक्षिण अफ्रिकाको कमजोर पक्ष हो ।
सन् १९८३ का विशव कप विजेता टिमका कप्तान कपिलदेव एवम् नवजोत सिंह सिद्धको शब्दमा यो टिम १९८३ भन्दा पनि प्रतिभाशाली छ । यस टिममा वीरेन्द्र सहबाग, सचिन तेन्दुलकर, विराट कोहली, युवराज सिंह, महेन्द्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, युसूफ पठानको रूपमा एक से एक म्याच विजेता छन् । महìवपूर्ण र सकात्मक कुरा यो भारतीय टिमको हकमा के छ भने पहिले जितको स्थितिमा समेत भारतीय खेलाडीले म्याच गुमाउथें यसपाली हारको स्थितिमा समेत जित्न सक्ने विश्वास तिनमा छ । नकारात्मक पक्ष तेन्दुलकरलगायत महìवपूर्ण खेलाडीका फिटनेसको कुरा हो । अर्को कुरा, दक्षिण अपि|mकामा भारतीय व्याट्सम्यान पठान बाहेक लगभग ‘फ्लप’ रहे । मुरली विजयले ३ म्याचमा १८ रन बनाए, रोहित शर्माले ५ म्याचमा ४९ रन बनाए । युवराजले ५ म्याचमा ९१ रन, सुरेश रैनाले १११ र धोनीले मात्र ७५ रन बनाए । अर्थात् यो टिम ‘क्रेक’ हुन सक्छ । भारतीय मिडियामा खेलाडी नाम चर्चा खुब हुन्छ तर नामले होइन जित कामले मात्र हासिल हुनसक्छ । खेल समीक्षक एआर हेमन्तले ‘इज इन्डियाज ग्लास हाफ फुल अर इम्पट’ शीर्षकमा लेखेका छन्, ” २००७ को -विश्वकपको) पाठ बिर्सिएको छ । भारतमा खेलाडीको र्फमभन्दा नामले मूल्याङ्कन गरिन्छ ।…. युवराजले रन बनाउन र हरभजनले विकेट लिन जरुरी छ ।” ओपनिङमा सफलता र मध्यक्रम टिकाउ भए मात्र भारत लक्ष्यसम्म पुग्न सक्छ । निसन्देह भारतीय टिम अन्य टिमभन्दा सशक्त छ -उसको सम्भावना यस पाली बढी छ तर जितका लागि कागजमा हैन कर्ममा सम्भावनालाई अनुवाद गर्न सक्नु पर्छ ।
Posted by: Raju Gurung Source: Youba Munch
पुराना पेजहरु महिना छान्नुहोस् जुन 2019 (46) मे 2019 (46) अप्रील 2019 (14) मार्च 2019 (21) फ्रेवुअरी 2019 (55) जनवरी 2019 (67) डिसेम्बर 2018 (71) नोभेम्बर 2018 (38) अक्टोबर 2018 (28) सेप्टेम्बर 2018 (55) अगस्ट 2018 (52) जुलाई 2018 (63) जुन 2018 (77) मे 2018 (72) अप्रील 2018 (73) मार्च 2018 (58) फ्रेवुअरी 2018 (60) जनवरी 2018 (64) डिसेम्बर 2017 (75) नोभेम्बर 2017 (74) अक्टोबर 2017 (73) सेप्टेम्बर 2017 (71) अगस्ट 2017 (85) जुलाई 2017 (87) जुन 2017 (72) मे 2017 (47) अप्रील 2017 (66) मार्च 2017 (55) फ्रेवुअरी 2017 (53) जनवरी 2017 (54) डिसेम्बर 2016 (43) नोभेम्बर 2016 (81) अक्टोबर 2016 (73) सेप्टेम्बर 2016 (88) अगस्ट 2016 (89) जुलाई 2016 (86) जुन 2016 (77) मे 2016 (83) अप्रील 2016 (88) मार्च 2016 (114) फ्रेवुअरी 2016 (110) जनवरी 2016 (85) डिसेम्बर 2015 (81) नोभेम्बर 2015 (76) अक्टोबर 2015 (94) सेप्टेम्बर 2015 (95) अगस्ट 2015 (97) जुलाई 2015 (93) जुन 2015 (92) मे 2015 (100) अप्रील 2015 (106) मार्च 2015 (99) फ्रेवुअरी 2015 (60) जनवरी 2015 (58) डिसेम्बर 2014 (96) नोभेम्बर 2014 (106) अक्टोबर 2014 (110) सेप्टेम्बर 2014 (103) अगस्ट 2014 (96) जुलाई 2014 (83) जुन 2014 (95) मे 2014 (89) अप्रील 2014 (110) मार्च 2014 (103) फ्रेवुअरी 2014 (96) जनवरी 2014 (109) डिसेम्बर 2013 (100) नोभेम्बर 2013 (90) अक्टोबर 2013 (105) सेप्टेम्बर 2013 (134) अगस्ट 2013 (117) जुलाई 2013 (125) जुन 2013 (110) मे 2013 (121) अप्रील 2013 (130) मार्च 2013 (121) फ्रेवुअरी 2013 (108) जनवरी 2013 (124) डिसेम्बर 2012 (122) नोभेम्बर 2012 (121) अक्टोबर 2012 (119) सेप्टेम्बर 2012 (142) अगस्ट 2012 (159) जुलाई 2012 (161) जुन 2012 (164) मे 2012 (187) अप्रील 2012 (148) मार्च 2012 (177) फ्रेवुअरी 2012 (123) जनवरी 2012 (111) डिसेम्बर 2011 (137) नोभेम्बर 2011 (164) अक्टोबर 2011 (176) सेप्टेम्बर 2011 (174) अगस्ट 2011 (202) जुलाई 2011 (179) जुन 2011 (199) मे 2011 (229) अप्रील 2011 (245) मार्च 2011 (279) फ्रेवुअरी 2011 (250) जनवरी 2011 (252) डिसेम्बर 2010 (183) नोभेम्बर 2010 (138) अक्टोबर 2010 (220) सेप्टेम्बर 2010 (253) अगस्ट 2010 (390) जुलाई 2010 (256) जुन 2010 (210) मे 2010 (220) अप्रील 2010 (166) मार्च 2010 (229) फ्रेवुअरी 2010 (131) जनवरी 2010 (207) डिसेम्बर 2009 (152) नोभेम्बर 2009 (141) अक्टोबर 2009 (103) सेप्टेम्बर 2009 (92) अगस्ट 2009 (157) जुलाई 2009 (130) जुन 2009 (89) मे 2009 (172) अप्रील 2009 (62) मार्च 2009 (50) फ्रेवुअरी 2009 (25) जनवरी 2009 (48) डिसेम्बर 2008 (77) नोभेम्बर 2008 (62) अक्टोबर 2008 (25) सेप्टेम्बर 2008 (21) अगस्ट 2008 (3) जुलाई 2008 (2) जुन 2008 (2)
गुठी विधेयक फिर्ता भएपनि आज माइतीघर मण्डलामा खबरदारी सभा हुने
इजिप्टका पूर्व राष्ट्रपति मोर्सीको निधन
जुलाई ५ जाब्रियाको सेन्ट्रल ब्लड बैंकमा जाउँ रक्तदान कार्यक्रमा सभागी बनौ
भारतमा अत्यधिक गर्मी : ‘लू’ र इन्सेफ्लाईटिसले २०० भन्दा बढीको मृत्यु
भारतमा अत्यधिक गर्मी : 'लू’ र इन्सेफ्लाईटिसले २०० भन्दा बढीको मृत्यु